Ny fifandraisana mety ho samy hafa: matotra, namana, na fotsiny namana; tena marina, izany hoe, amin’ny fotoana feno, ary virtoaly, akaiky sy ny tsy. Matetika indrindra, Niaraka virtoaly ny fifandraisana miteraka ny vavy sy ny tanora lehilahy sy ny vehivavy izay efa manambady ary manan-janaka. Ny farany fotsiny ho an’ny tena ny fifandraisana matetika no tsy ampy ny fotoana. Ny olona mitady virtoaly ny fifandraisana matetika ary dia mivory toy izany koa ny mpankafy baolina kitra, hockey, fanjonoana sns. araka izy ireo.
Ny fomba tsotra indrindra ny Fiarahana ho virtoaly fifandraisana amin’ny finday. Izany dia afaka ny ho ampiasaina mba fifanakalozana SMS ao anatin’ny SMS-chat no nomen’ny misy finday mpandraharaha.
Ny ankizivavy sy ny vehivavy, tarihin’ny avo dia avo ny fihetseham-po matetika ny mitady olona izay izy ireo dia afaka miaina amim-pifaliana ao amin’ny fanambadiana, mba hitaizana ny ankizy.
Ny olona toy izany dia afaka manomboka lehibe Mampiaraka toerana
Fiarahana ho virtoaly ny fifandraisana, matetika izy ireo mahita ny vehivavy ny sehatra fiadian-kevitra. Ny tsirairay amin’izy ireo dia ny olona tao, raha ny marina, nametraka ny feo ny fifandraisana eo amin’ny tranonkala. Fa mahaliana foana, foana afaka mahita lohahevitra mahazatra ny resaka.
Fa niverina lehibe Mampiaraka toerana toy ny»virtoaly ny Fiarahana». Ny tena manararaotra ny hafa toy izany koa ny fitaovana an-tserasera fa izahay tsy hamela ny olona mba hifidy, isika koa be dia mihafohy fikarohana amin’ny fanomezana anao ny mombamomba ny afa-tsy ireo olona izay mifanaraka amin’ny ianao. Noho izany, miaraka aminay ianao, dia azo antoka fa hahita olona mitovy zavatra tiana. Ary Fiarahana ho virtoaly ny fifandraisana no tena zava-dehibe.
Tokony atao. Izany dia ampy mba mamaritra ny lahy sy ny vavy ary ny lahy sy ny vavy ny mpiara-miasa, ny anarana, ny adiresy mailaka sy ny tenimiafina, ary avy eo dia mizara ny psych test.
Ary ny olona rehetra amin’ny tantara noforonina
Ny rafitra dia avy hatrany mahita ianao olona vitsivitsy tena mifanaraka aminao, ary dia matetika manampy ny lisitra io. Ianao koa dia afaka mameno ny endrika, tsara izany dia tsy ho ilaina. Na dia azo atao avy rehetra ny karatra sy tsy misokatra — manao tahaka ny fantatrareo ihany.
Amin ny fitsipika, izany dia ny tokony atao
Fisoratana anarana ao amin’ny habaka dia tanteraka an-tsitrapo sy malalaka. Mifandray ary hahita ny namana sy ny havan-tiany, miaraka amin’ny»virtoaly Mampiaraka»
← Ankizivavy online chat